14-kii saxiix ee Tababare Louis Van Gaal sameeyay Halka ay hadda ku Dambeyan %
14-kii saxiix ee Tababare Louis Van Gaal sameeyay Halka ay hadda ku Dambeyan
By Ramzi Yare	 Last updated Mar 31, 2020
Tababarihii hore ee Man United, Louis van Gaal ayaa la soo saxiixday illaa 14 ciyaaryahan labadii sano ee uu maamulayay Kooxda Manchester United.
Warbixintan waxaan ku eegi doonnaa dhamaan saxiixyadii uu sameeyay Van Gaal waqtigiisii Man United iyo halka ay hadda ku dambeeyaan xiddigahaas.
1- Radamel Falcao Van Gaal ayaa ka taqallusay Danny Welbeck si maalintii ugu dambeysay suuqii xagaaga 2014 ula saxiixdo shabeelka reer Colombia, hase ahaatee, Falcao waqtigiisii Man United waxa uu noqday mid niyad jab leh, isagoo kaliya afar gool dhaliyey 29 kulan oo uu u saftay Red Devils, kaddib xilli ciyaareedkiisii amaahda ahaa ee Old Trafford, waxa uu waqti kale oo liita ku qaatay kooxda Chelsea oo uu dhaliyay kaliya hal gool, ka hor inta uusan u sii baqoolin kooxda Galatasaray xagaagii hore.
2- Daley Blind Waxa uu ahaa ciyaartoy ay saxiixiisa xiiseynayeen taageerayaasha Man United kaddib kubaddii uu Robin van Perise u soo xambaaray ciyaartii ay Spain kaga adkaadeen 5-1 ee ka tirsaneyd wareegga guruubyada ee koobkii Adduunka ee Brazil ka dhacay 2014, 28-sano jirkaan ayaa noqday mid ka mid ah difaacyada ugu wanaagsan xirfad ahaan kooxda Man United, balse dhibaato jir ahaaneed oo soo gaartay darteed waa uu xamili waayay u ciyaarista United, isagoo ku laabtay Kooxda Ajax oo uu hadda wacdaro ka dhigayo.
3- Marcos Rojo Bilawgiisii Red Devils waxa uu ahaa mid qurux badan, balse dhaawacyo soo noq-noqday ayaa hoos u dhigay xirfaddiisa. hadda waxa uu amaah ugu ciyaarayaa Estudiantes, balse milkiyaddiisa weli waxaa iska leh Manchester United.
4- Angel Di Maria Waxa uu noqday saxiixii ugu qaalisanaa kooxda xagaagii 2014, waxaana maalmihii koowaad ee nolosha Old Trafford u ahayd mid wacan, si kastaba ha ahaatee, dhaawac cajarka ka soo gaaray kulan ay kooxdiisa la qaadatay Hull City bishii November ee 2014 ayuu sababsaday, markii uu dhaawacaas ka soo kabsaday kuma uusan soo laaban qaab ciyaareedkiisii wacnaa, tiiyoo ay jirto inay isku dheceen Macallin Van Gaal, ugu dambeyn xilli ciyaareedkaas kaddib waxa uu u dhaqaaqay naadiga Paris Saint-Germain oo uu hadda ka tirsan yahay.
5- Ander Herrera Qaab ciyaareedkiisii wacnaa ee kal ciyaareedkii 2016-17, waxa uu Herrera ku muteystay laacibka sanadka ee naadiga Manchester United, balse qaab ciyaareedkaas kuma uusan soo laaban tan iyo markaas, isagoo bishii June ee sanadkii hore bilaash ugu dhaqaaqay PSG, kaddib markii uu dhacay qandaraaskiisii Man United.
6- Luke Shaw Shaw ayaa ku dhibtooday kooxda Manchester United xilli ciyaareedkiisii koowaad, balse waxa uu qaab ciyaareed wanaagsan helay bilawgii xilli ciyaareedkii 2015-16 ka hor inta uusan dhaawac halis ah soo gaarin, saddex sano oo uu ku jahwareersanaa dib u helidda qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa, ugu dambeyn xilli ciyaareedkii hore ayuu ku soo laabtay dooqa koowaad ee booska difaaca bidix ee Red Devils.
7- Vanja Milinkovic-Savic Man United ayaa goolhayahan reer Serbia kala soo saxiixatay kooxda Vojdovina bishii August ee 2014, balse marnaba ma uusan u safanin kooxda, iyadoo November 2015 laga fasaxay Red Devils.
8- Victor Valdes Valdes bilaash ugu soo biirray Manchester United bishii Janaayo ee 2015, balse keliya labo kulan oo qura ayuu u ciyaaray ka hor inta uusan Middlesbrough bilaash ugu biirrin 18 bilood kaddib, markii ay Middlesbrough u laabatay horyaalka heerka labaad ayuu goolhayahii hore ee Barcelona isaga fariistay ciyaaraha kubadda cagta guud ahaan.
9- Bastian Schweinsteiger Waxa uu ahaa saxiix aad u wanaagsan, kaasoo sanooyin ay sugaayeen taageerayaasha Man United. Bastian ayaa qaab bilaash ah kaga soo tagay Bayern Munich, balse kaliya labo sano ayuu xiddig sare ka ahaa Old Trafford, waxaana uu ugu dambeyn u dhaqaaqay Chicago Fire bishii Maarso ee sanadkii 2017, laacibkii hore ee qaranka Jarmalka ayaana la aaminsanyahay inuu sababsaday Jose Mourinho, waxaana uu ugu dambeyn ciyaaraha, isaga fariistay dhammaadkii 2019-kii.
10- Sergio Romero Dabcan waxaa la aaminsanyahay inuu yahay goolhayeyaasha dooqa labaad midka ugu wanaagsan, bilawgii xilli ciyaareedkii 2015-16 ayuu goolka ku soo billaabanayay maadaama xaaladda mustaqbalka David de Dega ay ahayd mid kacsan, qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa waxa uu ka dhaxlay in Man United ay illaa hadda ay sii heysato.
11- Memphis Depay Memphis ayaa Red Devils kaga soo biirray Kooxda PSV, balse waa uu ku guuldarreystay inuu ka soo dhalaalo Old Trafford, macallin Jose Mourinho ayaa ugu dambeyn ka iibiyay kooxda Lyon laacibka reer Netherlands bishii Janaayo ee 2017, inkastoo heshiiskaas lagu daray inay dib u soo iibsan karto Man United.
12- Morgan Schneiderlin Si la mid ah Depay, Schneiderlin ayaa Man United ku soo biirray xagaagii 2015, waxaana uu ka dhaqaaqay suuqii jiilaalka ee 2017 isagoo Everton ku biiray, maadaama uu ka soo iftiimi waayay Old Trafford.
13- Matteo Darmian Si qurux badan ayuu isna ku billawday xilligiisa Manchester United xilli ciyaareedkii 2015-16, balse durba waa qaboobay, saddex sano oo uu safka kooxda isaga jiray muunad la’aan kaddib, ugu dambeyn Darmian wuxuu ku biirray Parma maalintii ugu dambeysay suuqii xagaaga ee la soo dhaafay.
14- Anthony Martial Inkastoo uu illaa hadda qaab ciyaareed joogto ah oo dheerraad ah sameyn la’yahay, haddana marmarka qaar waxa uu muujiyaa muhiimadda uu u leeyahay kooxda, waxa uu xilli ciyaareedkaan dhaliyay goolal muhiim u ah kooxda, welina waxa uu ka mid yahay xiddigaha Manchester United.
Jose Mourinho ayaa Soo Xushay Shaxda 11-ka xiddig ee ugu fiicnaa uu macalin u noqday
Podolski ayaa shaaca ka qaaday sababtii uu Xiddiga Serge Gnabry uga tagay Arsenal